Ahịa nke ahịa nke ọgba tum tum sprocket bụ ihe a na-apụghị ịkọwa atụ, na-emepụta ohere ndị magburu onwe ha China abanyela n'ọkwá ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na ụwa, mana site na ike nke mmepe na ọkwa zuru oke, ikike kwa afọ nke China nke moto ...
Nnyocha nke usoro igba mgbanaka nke mbubata n'oge arụ ọrụ nke ọgba tum tum
(1) Carburized ọgba tum tum sprockets chọrọ a carburized oyi akwa na eze nha nha. Mgbe a na-eji usoro "carburized-warm extrusion" eme ihe, nkesa nke oyi akwa ahụ nwere njikọ chiri anya na usoro nrụrụ nke ịkpụ. Maka usoro nkewapụta nke gbasaa, ...
Enwere ike ikewa nrụgide ọgwụgwọ ọkụ na nrụgide ọkụ na nrụgide anụ ahụ. Mgbanwe ọgwụgwọ ọkụ nke arụ ọrụ ahụ bụ nsonaazụ nke ngwakọta nke nrụgide ọkụ na nrụgide anụ ahụ. Ọnọdụ nke nrụgide ọgwụgwọ ọkụ na arụ ọrụ na mmetụta ọ na-akpata dị iche iche. The inte ...